Qophii Marii Hawaasa Oromoo Biyya Jarmanii - Caboowanci.com-Oromia
Qophii Marii Hawaasa Oromoo Biyya Jarmanii
July 18, 2017 Nadhani	1 Comment #Oromo Revolution, OLF, OMN
Harka fuune Ummata Oromoo biyya German keessa jirtan hundaafi nagaafi kabajinni keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa sagantaa guddaa guyyaa gaafa Hagayya 12, 2017 (August 12, 2017) magaala Darmstadt itti qopheessaa deeminnu irrati akka nuuf argamitan kabajaan isin waaminna akkasumas affeerra.
Sagantaa kana illaalichisee rakkoo bifa adda addaatiin alaafi keessatti nu quunammaa jiru furmaata itti barbaduufi olaantummaa mirga Oromo kabachiisuu danda’uu irrati marii guddaa tokkotuu qophaa’ee jira. Yeroo Ammaa kanatti firoota fi huminna Oromoo dhaaf tumissuu danda’uu dhaaba adda addaa horachaa waan jiruufi akka dhuunifaatis akka sabaatis waan nu irraa barbachisuu guuttachuudhaan tumissa nuuf qophaa’ee irrati of qopheessu danda’uu irrati mariin balidhinaan ni jira.
Dabalataanis keessummaan irrati affeeramani Barreesaafii Qorataa wa’ee waliigaltee fi hariiroo poolisii biyyootaa alaa keessaayyuu Germany fi Ethiopia ( Germany and Ethiopian foreign Policy) qorataa kan ta’ee maqaan isaani Obbo Marischka lammii Jarmanii kan ta’ee Qorannoo isaafi gabaasa isa Hawaasa Oromoo dhaaf guyyaa kana dhiheesuuf qophii isaa xumuratee jira.
Itti aanisees erga baldhinaan mari’atamee booda furmaata itti goonee sagantaa dhumaaratis qophiinii bashananaa fi sirbaa akka jiru asumaan isin beekissisuu barbaanna akkasumas Artistoonni keenya qophii isanii xumuratanii isin eegaa jiru.
Laaqanis (Nyaanni) Buna, Shayyii fi dhugaatiin adda addaa bifa hundaannu ni jira.
Sa’aatiin saganitaan itti jalqabamuu 13:00 hrs (01.00 pm) dhaa.
Yoo dhufitaan yeroodhaan sa’aatii jedhameeti koota. Sana ta’uu yoo baatee erga saganitaan jalaqabamee dhufuudhaa mannaa hafuu wayya! Sa’aatii Kabajuun naamusaa!
Bakka: Knabenschule, Ludwigshöhstraße 42, 64285 Darmstadt.
(S-bahn lakkofissa 3 Luisenplatz ykn Centaral City center irraa. Akkasumas Bahnof irra argachuun ni danda’ama. Daqiiqa 15nin ni jira amma galgalaatti.
Nadhani Tilahun : tel.015217680645
Mohammed Haji: 015213908446
Mhammed Abdo: tel.051213904301
Alsadin K.tel. 015214449026
Qadir. tel. 015213881261
← Beelaan Ummani Du’aa Nyaata Export Ta’a
የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ብሄራዊ ውርደት መውጣት አለበት! →
One thought on “Qophii Marii Hawaasa Oromoo Biyya Jarmanii”
Artistoonni eenyu faadha?
Copyright © 2019 Caboowanci.com-Oromia. All rights reserved.